ICasa de Campo Tarapari Yungas - I-Airbnb
ICasa de Campo Tarapari Yungas
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguClea
ICasa de Campo Tarapari Yungas yindlu entle ye-adobe ephakathi kwifama yekofu ephilayo kunye negadi yendalo eyohlukeneyo kwilali ezolileyo yaseChulumani, eMzantsi Yungas nje iiyure ezi-4 ukusuka eLa Paz, eBolivia. Ifama izolile, iluhlaza kwaye inemibono emihle, iterrace kunye nepatio, ikhitshi eligcweleyo.
Indlu inekhitshi kunye negumbi lokutyela ezantsi, elinezixhobo ezipheleleyo. Kukwakho nemyuziyam encinci yezinto eziphilayo kumgangatho wokuqala, esetyenziswa xa abantwana besikolo bendwendwela. Phezulu kukho igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye neshawari, amagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlala. Kukwakho ne-terrace ephuma kumgangatho wesibini kunye nepatio yokugquma engezantsi. Imiyezo emikhulu iphuma kwindlu, ejongene namahlathi ashinyeneyo neefama zecoca zalo mmandla.
Umbuki zindwendwe ngu- Clea
Umlawuli wethu uya kuba ekho ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo.